AC Milan oo dalab rasmi ah oo €36m ku kacaya u dirtay Andrè Silva (Klinic oo ay mid kale u direen) – Gool FM
(Milano) 11 Juunyo 2017 – AC Milan ayaa gudbinaysa dalab ku kacaya €36m oo ay FC Porto kaga doonayso Andre Silva, sida laga soo sheegay Portugal, balse Zenit St Petersburg ayaa iyana doonaysa.
21-jirkan u safta dalka Portugal ayaa ah gooldhaliye la joojin la’aa tan iyo markii lagusoo daray safka waawaynka Porto xagaagii tegey, isagoo 21 gool dhaliyay 44 kulan, sidoo kalana 7 gool u dhaliyay dalkiisa 8 kulan oo uu saftay.
Sida ku dhigan warsidaha Portuguese-ka ku kalaama ee Diario de Noticias, Milan ayaa Khamiistii la kulantay wakiilka Jorge Mendes oo ay miiska u saartay dalab gaaraya €36m, yeelkeede, waxaa sidoo kale doonaysa kooxda Roberto Mancini ee Zenit.
Hilinka Sky Sport Italia iyo Mediaset Premium ayaa tilmaamaya in dalabka laacibkani uu ka soocan yahay dalab ku kacaya €20m oo ay Milan u bandhigtay Fiorentina oo ay ka doonayso Nikola Kalinic, maaddaama ay ka kala dheelaan laba boos oo kala geddisan.
Andre Silva wuxuu ka dheeli karaa weerarka dhexe, balse sidoo kale kaaliye weerar buu noqon karaa isagoo ka imanaya garabka midig iyo midka bidix ee weerar seddexleey ah (trident attack) iyadoo looga maarmi karo Keita oo Milan isu micneeynaya.